Mivarotra tsara noho ny iPad an'ny Apple ve ny Microsoft Surface? | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | fifaninanana, iPad
Mazava ho azy fa tsy mandeha amin'ny fotoana tsara indrindra ny iPad. Ny takelaka Apple dia nandroso fahanterana tamin'izay efa nahazatra ny vokatra Apple ary ny fivarotana ny iPad amin'ny maodeliny rehetra dia mihoatra lavitra noho ny malina raha oharina amin'ireo tamin'ny fotoana hafa. Na eo aza izany dia aza adalana: ny iPad dia mbola amidiny tsara ihany, na dia amin'ny isa ambany kokoa noho ny taloha aza. Na izany aza, toa miha mahazo vahana i Microsoft miaraka amin'ny Surface, ka ho hitantsika raha mamaky ny lahatsoratra navoaka tao amin'ny WinBeta, Forbes ary bilaogy manan-danja hafa, izay milaza fa nahavita nandresy an'i Apple tamin'ny varotra takelaka i Microsoft. Vetivety ny olona dia nilaza fa ny Surface dia efa namoaka ny iPad, fa andao jerena ilay lahatsoratra voalohany sy izay tena lazainy, ary avelao any ireo lohateny tabloid.
Ny fandinihana izay niorenan'ireto lahatsoratra ireto dia notontosain'ny 1010Data, ary ao no ahitantsika fa nandritra ny volana Oktobra 2015 dia namidy tao amin'ny magazay an-tserasera noho ny Apple iPad ny Microsoft Surface. Tsy miresaka afa-tsy amin'ny volana Oktobra isika, ary raha tsy mitandrina ny fivarotana an-tserasera any Etazonia isika, dia tsy misy fivarotana ara-batana na ivelan'io firenena io. Saingy tsy ny antsipiriany sisa tavela eto no mamela ny fandinihana somary "nalaina tamin'ny sombin-tsiranoka", fa ao koa ny fivarotana ny Microsoft Surface sy ny Surface Book. Raha efa mieritreritra aho fa ny fampidirana ny Surface amin'ny sokajy mitovy amin'ny iPad dia tsy ara-drariny (ny voalohany dia solosaina finday kokoa noho ny takelaka), raha efa ampidirintsika ny Surface Book dia vao mainka hiharatsy izany, satria laptop madio sy sarotra ity. ary izay kely (na tsy misy na inona na inona) dia misy ifandraisany amin'ny iPad, na dia amin'ny iPad Pro aza. Amin'izay fotoana izay, Tsy rariny ve raha ampidirina amin'ireo an'ny iPad ny varotra MacBooks?Araka izany dia nifaninana tamin'ny mitovy ny fepetra.
Andao ihany koa hijery ny volana isehoan'ny zava-drehetra: Oktobra. Ary andao ihany koa hijery ny sary. Raha niharan'ny fiakarana mahavariana tamin'ny 25% hatramin'ny 45% i Microsoft tao anatin'ny iray volana, dia nihena i Apple tamin'io volana io ihany 35% ka hatramin'ny 17%. Tsy kisendrasendra fa tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra dia nanolotra ny Surface vaovao azy i Microsoft raha toa kosa ka tsy nandefa ny iPad Pro i Apple raha tsy tamin'ny tapaky ny volana Novambra. Toy ny mahazatra matetika alohan'ny hamoahana vokatra vaovao dia miadana ny fivarotana ireo izay ho "lany andro" noho ny fahatongavan'ireo vaovao.
Fa ny tsara indrindra amin'ny sisa: ny fianarana dia tsy mifototra amin'ny singa amidy, fa amin'ny vola miditra. Izany hoe Ny fandinihana dia milaza fa mivarotra takelaka bebe kokoa i Microsoft rehefa tena tokony hilaza izy io fa mahazo vola bebe kokoa, indrindra amin'ny fiheverana fa ny Microsoft Surface dia manana vidiny $ 844 sy iPad 392 $. Raha ny marina, ny lahatsoratra tany am-boalohany nataon'i WinBeta Izao no voalaza ao amin'ny footer ny iray amin'ireo sary misy sary (ary adika ara-bakiteny):
Microsoft dia mety mivarotra takelaka vitsy kokoa amin'ny Internet noho Apple, fa ny vidin'ny median'ny fivarotana an'i Microsoft dia avo roa heny.
Ary noho ny tarehimarika izay tantananay dia tokony hivarotra singa avo roa heny noho ny Microsoft i Apple mba hifanaraka amin'ny varotra arak'ity fandalinana ity, izany hoe Na dia mivarotra tablette betsaka noho Apple aza i Apple, satria avo roa heny noho ny an'i Microsoft, izay rehetra tsy tokony hivarotana mihoatra ny avo roa heny izay heverin'i Microsoft fa amin'ity fanadihadiana ity dia voalaza fa mivarotra mihoatra ny Apple.
Avelako amin'ny farany ny sary farany an'ny fandinihana. Raha raisina ny roa ambin'ny folo volana lasa (tsy ny volana Oktobra fotsiny) dia ireto no varotra (manantitrantitra aho, amin'ny vola fa tsy amin'ny singa) isaky ny marika. Na eo aza ny fametrahana an'i Surface sy Surface Book ao anaty kitapo i Microsoft, dia avo roa heny noho ny an'ny Apple ny vidin'ny "takelaka". Mitohy mitarika ny varotra Apple, saika avo roa heny noho ny an'ny Microsoft. Saingy tsy maninona ireo "minutiae" ireo rehefa mamoaka lahatsoratra, satria hoy izy ireo, "ny marina tsy manimba lohateny tsara."
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » fifaninanana » Mivarotra tsara noho ny iPad an'ny Apple ve ny Microsoft Surface?
M $ matetika dia hoy izy:
Azo atao ny manohy mivarotra tsaratsara kokoa ny ipad fa ny mazava dia ao Cupertino dia efa mazava momba ny mpifaninana horesena.
Raha mbola mitohy amin'ny takelaka mediocre ny androids, ny Surface dia voaporofo fa mpamono ipad marina ary hiafara amin'ny fikapohana ny ipad amin'ny varotra, raha ny marina, raha nisy ny vidin'ny ipad mini, dia mety ho efa ela taloha lasa izay fa ny vokatra dia vokatra lafo ary hitohy ny fitazonana ilay halo premium izay tian'ny Apple be loatra.
Mamaly an'i M $ matetika
Eo dia omeko anao tena marina, raha ny marina dia efa nanao ny dingana voalohany tamin'ny iPad Pro i Apple, na dia mino aza aho fa ny fampidirana rindrambaiko ho an'ny finday sy ho an'ny solosaina dia tsy maintsy mandroso be foana, satria i Microsoft no mamorona azy izao. tsy vita mahita azy.
Ny pro pro 4 dia nihinana ny pro iPad tamin'ny ovy ho an'ny… fampiasana rafitra informatika !!! Apple miaraka amin'ny vola anananao sarotra dia ny fanaovana OSX-touch ??? Microsoft dia mahazo ny batery ary ny iris scanner dia teknolojia vaovao izay microsoft no voalohany nampiharina tamin'ny finday avo lenta sy ny takelaka ary hihinana paoma izy ireo
Ford mba hanampy fanampiana CarPlay amin'ireo fiarany
Ity no fomba hanokafanao tavoahangy champagne amin'ny iPhone